Qisaska Faaliyeyaasha CIA iyo Madaxda Dunida! Maxaad Ka Ogtahay Arrimahan..!! - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: February 10, 2017, 12:48 am
Sanadadii lixdanaadkii qarnigii 20aad waxay ogaatay hay’adda sridoonka Maraykanka CIA in madaxd dunida ay si aad ah ugu xidhan yihiin faaliyayaasha iyo xidigiska kuwaasi oo ay u adeegsadaan inay uga waramaan arimaha dhacaya ee soo socda.
Sidaa awgeed iyaga ayaa sameeyay kooxo ay ku sheegeen inay yihiin faaliyaal ah oo ay ku dhex beereen dalal kala duwan kuwaasi oo aan cidi ogayn laakiin soo sameeyay dacayaado badan si loo rumaysto inay yihiin kuwa wax ka ogaan kara wakhtiyda soo socda.
Kooxahaasi ay abuureen ayaa faaliye u noqday madaweynihii hore Indonsiea Suharato , Ra’iiswasra Albanaaya, iyo Madaxweynihii dalka Ghan Kuwam Nakruma.
Sarkal sare oo ka tirsanaa CIA ayaa sheegay in faaliyayaasha ay sameeyeen ay ahaayeen kuwii ka nabad geliyaay dalka Ghana inuu ka dhaco afgebi dhiig badani ku daaato, ka dib markii Faaliyihii uu ku kalsoonaa oo ah mid CIA ku beertay kula taliyay inuu booqasho ku tago dalka Shiinaha taasi oo uu sheegay inay xukunkiisa u wanaagsan tahay cimrigiisuna sii dheeraanayo. laakiin intii kuu maqnaa Shiinaha aya afgenbi lagu sameeyey waxaana loo yaqaan afgembigii Cadda ee aan dhiigu ku daadan.
Dalka Maraykanka madaxweyinhii uu aaminada badanaa faaliyaha wuxu noqday Ronald Regan kaasi oo faaliyihiisu xataa shirar caalami ah ka baajiyay sida Shirkii hubka halista ee ka qayb geli laha. Isaga laftiisa ayaa buugiisa uu kaga waramayo noloshiisa ee uu qoray sanadkii 1965 ka hor intii aanu noqon xaakimka Calfironiya sheegay in isaga iyo xaakiisu ay aad u aaminsan yihiin faalka iyo xidigska. (Buuga: oddity of history mysterious events).
SAWIRRO Sanam 7 Qarni Ka Hore La Sameeyey Oo Aad Ugu Eeg Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Ayaa La Helay